China Pamba Katsi Katsi Remover Imbwa Bvudzi Kuchenesa Kapeti Mubhedha weSofa Bvudzi Kubvisa fekitori uye vagadziri | MiaSein
Chigadzirwa zita: Mhuri Pet Katsi Kitsi Remover Imbwa Bvudzi Kuchenesa Kapeti Mubhedha weSofa Bvudzi Kubvisa
Tsananguro: Inokodzera kuchenesa bvudzi-yakawanda, uye inokodzera kuchenesa bvudzi remhuka rinodonha kubva pamachira emubhedha, kapeti, masofa uye mbatya. Mbiri-nzira yekuchenesa bhurasho, kati bvudzi uye imbwa bvudzi, ese anogona kukweshwa. Nyore, nyore uye reusable
Item zita: Zvimwe zvekuchenesa uye runako zvigadzirwa
Usage: inogona kutenderera ichidzoka nekudzoka yakanangana pamusoro pemachira, makapeti, mbatya uye masofa kusvikira zvinhu zvataurwa pamusoro zvanyatsonamirwa. Wobva wachenesa uye udururire bvudzi kunze kwebhini. Pakupedzisira, suka gluing muchina
Ruvara: chena uye tsvuku
Saizi (mu cm): 19cm * 20cm
Feature: Kuchenesa peturu bvudzi
Chinyorwa: ABS, nylon fiber
Kushambidza nzira: Ichi chigadzirwa chinogona kushambidzwa chete. Ndokumbirawo kuti uome nejira rakaoma wapedza kusuka. Ndokumbirawo uzvichenese zvakasiyana nezvinyorwa zvevanhu
Hudzi hwechitoro: Muchipfuyo
Ndokumbira utarise: Ichi chigadzirwa chakagadzirwa uye chakagadzirwa chete nekambani yedu. Ichi chigadzirwa chinogona kungotsvaira bvudzi rakanamirwa nezvinhu zvakapfava pamasofa, kapeti, machira emubhedha uye mbatya, asi hazvigone kuchenesa mabhora ebvudzi. Usaise chigadzirwa ipapo icho vana vanogona kuzviwana. Usape chigadzirwa kuvana. Ichi chigadzirwa chakapinza, ndapota nzvenga kubata kwevana uye kutamba, ndokumbira utore zvinoenderana nemamiriro chaiwo ezvipfuyo. Paunenge uchishandisa, ndapota suka bvudzi zvakanaka kuti udzivise kukuvadza ganda rechipfuwo uye zvichikonzera dambudziko kwauri nekuchipfuwo chako. Ndokumbirawo uchenese zvine mutsindo nenzira yekuchenesa. Kana iwe usina kugutsikana nechigadzirwa, ndapota nyorera vatengi.
Pashure: Puppy Imbwa Hanzu dzechikadzi Teddy Bichon donje Jasi Chihuahua Bulldog Corgi madiki madiki anoremedza chipfuwo matsutso uye echando mbatya
Zvadaro: Imbwa Hembe Autumn uye Nguva yechando Zvakashandurwa kuita Mutete Chikamu Teddy Bichon Hiromi Poodle Pet Hembe Chipfeko Puppy Makumbo mana T-t-shati Muchinjikwa Kupfeka Wukong Pet Coat
Pet Double Bowl otomatiki Water Dispenser Preve ...